I-China yabantwana Sebenzisa iSanitizer yeZandla ngeTekhnoloji ye-BIO mveliso kunye nabenzi Zhongrong
Isandla seSanitizer TECH-BIO
Abantwana basebenzise iSanitizer yeZandla i-TECH-BIO
I-50ml yeSanitizer yesandla i-TECH-BIO
I-500ml yokuThambisa iSanitizer yeTekhnoloji ye-BI
Isicoci ngesandla se-OEM
Iipesenti ezingama-75 zotywala utywala
50ml 75% Utywala obuneentsholongwane TECH-BIO
I-500ml 75% Utywala obuchaphazela iintsholongwane kwi-TECH-BIO
I-2.5L 75% I-TECH-BIO yoTywala
Iipesenti ezingama-75 zotywala ezibulala iintsholongwane kwi-IBC / Drum
Sula iintsholongwane kwi-TECH-BIO
1 isiqwenga soTywala / iHyamine Sula
10 iziqwenga zotywala / iHyamine Sula
Iziqwenga ezingama-50 zotywala / iHyamine Sula
Iziqwenga ezili-150 zoTywala / iHyamine Sula
I-50ml yesandla seGelizer yeTekhnoloji ye-GI
I-500ml ye-Mositure Hand Sanitizer Gel TECH-BIO
Ngaphezulu kweminyaka engama-20 yamava kugxilwe kumzi-mveliso wokubulala iintsholongwane
Ngaphantsi kwefuthe le-covid-19, Isandla I-Sanitizer iba yimfuneko yokhathalelo lobuqu kubomi bethu bemihla ngemihla ngakumbi kwezinye iindawo zikawonke-wonke ezinje ngesikolo, isibhedlele, ivenkile enkulu, ihotele, njl. Njl. I-30ml pack ilungiselelwe ngokukodwa ukuba isetyenziswe ngabantwana kwaye inokuqhutywa malunga nesiqingatha senyanga, ke isempilweni kubantwana.Sinokwenza ngokwezifiso ipakethi ngenxa yeemfuno zabathengi ezahlukeneyo. Njengoko sivelisa utywala obukrwada, ixabiso lethu liyakhuphisana nomgangatho ophezulu. Ngapha koko, sidlule i-CE, i-FDA, kunye ne-ISO yokuqinisekisa. Sazisa uphawuI-TECH-BIO ukubenza njengophawu 1 lophawu lokususa iintsholongwane e-China njengoko sinobulunga obuphezulu botywala e-China. Siyinkokeli e-China kwitekhnoloji ye-ethanol. Sine-500,000 yendawo yokusebenzela yemitha kwiphondo laseHebei, China. Inkampani yethu yasekwa ngo-1999. Nangona kunjalo, sinokwamkela i-OEM kunye ne-ODM ngazo zonke iintlobo zokucoca ngesandla. Ukujonge phambili ekubeni liqabane lakho lehlabathi kwaye uzalisekise imeko yokuphumelela!
Zukiswa njengomnye wamashishini amaTshayina aPhakamileyo-eTekhnoloji, iZhongRong Technology Corporation Ltd. Ngokusekwe kwimishini "yokukhuthaza inkqubela phambili yoluntu ngovuselelo oluzinzileyo", inkampani igxila kwi-R & D, imveliso kunye nentengiso ye-ethanol kunye ne-wellas yayo ephezulu kunye nokuhla kwemveliso ngaphezulu kweminyaka engamashumi amabini, kwaye iyazinikezela ekubeni ngumthengisi okhuphisana kakhulu kwi-ethanol engeyiyo ingqolowa.
Izithako ezisebenzayo: Utywala iEthyl 75% (V / V)
Umthamo womnatha: 30ml
Izinto eziluncedo: Utywala busekwe kwindawo ekhuselekileyo kwindalo esingqongileyo · Triclosan Simahla · usempilweni
Ubona: Ukunceda ukuphelisa iintsholongwane kulusu ezinokubangela izifo kunye nokuthambisa ulusu.
Isikhokelo: Beka isixa esincinci esandleni uze uhlikihle de kome.
Izilumkiso: Ukusetyenziswa kwangaphandle kuphela · Izinto ezinokutsha · Gcina kude nobushushu nedangatye ∙ Gwema ukudibana namehlo nolusu olaphukileyo.
Izithako ezingasebenziyoAmanzi acociweyo, iCarbopol, Isopropyl Alcohol, Triethanolamine
Olunye ulwazi: Igcinwe kwindawo eyomileyo etywiniweyo.
Umhla WOKUPHELELWA: iminyaka eyi-2
Ilebhu ivavanyiweUkusebenza ngokuchasene neentsholongwane eziqhelekileyo
Yenziwe yiZhongrong Technology Corporation Ltd.
Yongeza: Hayi. 1 Changqian Road, kwiSithili seFengrun, kwiSixeko saseTangshan, kwiPhondo lase-Hebei, e-China
Olu hlobo lwe-sanitizer yesandla lufanelekile abantwana njengoko kungekho siqholo kwiresiphi. Akukho zinto ziyingozi nezinetyhefu ebantwaneni. Ipakethi yebhotile yeplastiki ikumgangatho ophezulu kwaye akukho lula ukuba yaphulwe. Umthamo we-30ml uphatheka kwaye kulula ukuwusebenzisa naphina xa ususa iintsholongwane ebantwaneni. Iya kuba lukhetho lwakho olulungileyo ukukhusela impilo yabantwana kude neentsholongwane eziqhelekileyo kunye ne-covid-19. Sinokwenza i-OEM kunye ne-ODM ukwenza ngokwezifiso ivolumu eyahlukeneyo kunye noyilo lokupakisha kunye nelogo yomthengi.
Ukupakisha kunye nokuhamba
Egqithileyo I-50ml yesandla seGelizer yeTekhnoloji ye-GI
Idilesi: Igumbi1602 iZiko leVanke, No.970 Nanning Rd., Isithili seXuhui, eShanghai 200235 Office SH Office）
Ifowuni: +86 21 6470 0198